IGoodData: I-SaaS Ekufuneni Ubukrelekrele Beshishini | Martech Zone
IGoodData: I-SaaS yokufuna ubukrelekrele kweShishini
NgoLwesithathu, Agasti 29, 2012 Lwesine, ngoFebruwari 25, 2016 Douglas Karr
Njengabathengisi, sikhukulisiwe yidatha. Izolo bendiphuhlisa ingxelo yenkqubela phambili ye-SEO endizise kuyo ukulandelela inqanaba, Idatha yeWebmasters, Idatha kaGoogle yokuHlola kunye Hubspot ukudibanisa iimetrikhi eziphambili kunye nokulungelelanisa ingxelo ukuqinisekisa ukuba ichanekile.
Izisombululo ze-Business Intelligence (BI) bezikade zikhona kwisithuba seShishini ixesha elininzi kwaye beziqhelekile ukufakwa kwabaxhasi / umncedisi ngemijikelezo emide yokuphumeza… ngamanye amaxesha iminyaka. Isisombululo se-BI sinokundivumela ukuba ndikhuphe idatha kuyo nganye yezo nkqubo kwaye ndakhe indawo yokugcina izinto ezihluza, ziguqule kwaye zibonise idatha kwifomathi enokusebenziseka ngakumbi.
KulungileData yiSoftware njengeSoftware yeNkonzo yoBukrelekrele beShishini enesakhono sokungenisa izinto zedatha ezahlukileyo, ukuhambisa umyalezo kunye nokwenza iideshibhodi, izikhombisi zokusebenza eziphambili (ii-KPIs) kunye nokwenza ingxelo. Nanku umthengi ethetha ngokusetyenziswa kweGoodData ukuphuhlisa iingxelo kunye neemetrikhi ngokulula. Qiniseka ukuba ujonge Ijelo leGoodData ye-YouTube -Ukubonelela ngeetoni zee-webinars kunye neenkcazo malunga nendlela yokusebenzisa ngokupheleleyo iqonga labo.
Njengoko kudwelisiwe kwi iphepha leempawuNazi izinto eziphambili zeGoodData:
Iideshibhodi kunye neeNgxelo -Yijonge idatha yakho ngokwezifiso ezinokulungiswa okanye ezinamandla kunye neideshibhodi usebenzisa iitafile zepivot okanye iitshathi. I-Pivot kubhabho ngeflick yemouse. Chaza itemplate yokufomatha ngokwesiko kunye nokomgaqo, ukuhla ukuya kwiiseli okanye kuzo zonke, chaza uluhlu lweekholamu ngemizuzwana, fumana ubalo lwendawo yespredishithi kwangoko ngokuqaqambisa imouse, tsala kwaye ulahle ukumiswa kwetshathi kunye nokulawula ukujikeleza kwelebheli nganye.
I-Metric kunye neZalathi zeNtsebenzo eziPhambili -I-GoodData ivumela abasebenzisi ukuba basebenzise amandla e-metric echazwe kwangaphambili. IGoodData inokwenza iimetriki zesiko ezijongana neemeko ezizodwa zeshishini, ichaze ii-KPIs kunye nokulandelela ukusebenza ngokuchasene neenjongo.
Uhlalutyo lweNtengiso yeHoc -Yenza uhlalutyo oluhamba phambili kwizifinyezo ezisekwe kwixesha. Idatha yesilayidi kunye nedayisi usebenzisa ujongano oluchukumisayo "yintoni kwaye kanjani" kwaye uchaze isiko kunye neemetriki zehlabathi / zekhaya, izihluzi kunye nokunye okuninzi. Sebenzisa umncedisi wokucoca ukufakela ngokuzenzekelayo ukhetho, inqanaba, uluhlu okanye iifilitha eziguquguqukayo. Yenza ntoni-ukuba uhlalutyo ngokuhamba ngokukhokelwa okanye wehle kwaye ungcolile ngolwimi olunamandla olunokufundwa olunemilinganiselo emininzi.
Ukusebenzisana kunye nokwabelana - Bambisana kwaye wabelane ngeeprojekthi, iingxelo kunye neziphumo kunye noogxa kunye nabaphathi ngexesha langempela. Ukulandelela kunye nokuphicotha imbali yeprojekthi. Chaza kwaye ubeke ingxelo ngeempukane. Mema abantu kwiiprojekthi zakho ukuba baxoxe kwaye babelane ngenkqubela phambili. Khuthaza ukuthatha inxaxheba kwixesha langempela. Shumeka okanye wenze iingxelo nge-imeyile kunye neetshathi usebenzisa uluhlu lokuhambisa.
IiNkqubo ezakhelwe kwangaphambili Iiapps zeGoodData zinxibelelana ngokuzenzekelayo nemithombo yolwazi efana neGoogle Analytics, iSalesforce kunye neZendesk, kwaye kuba zonke zakhiwe kwiqonga leGoodData, ungazandisa ngokulula ngokongeza idatha okanye ukwenza ngokwezifiso iimetrikhi ezibonisa iimfuno ezizodwa zeshishini.
Ukuba ubuchwephesha kwi-Intanethi ngedatha, unokuba nayo iqabane ledatha neGoodData. IGoodData ibonelela ngamandla okuphuhlisa kubahlalutyi imveliso kwintengiso ngaphakathi kweentsuku ezingama-90 ngaphandle komzamo wobunjineli. Abathengi bakho bafumana ukufikelela ngokupheleleyo kulo lonke iqonga leGoodData: iideshibhodi ezenziwe kwangaphambili, ukubonwa kwangaphambili, isilayidi kunye nedayisi, iimetrikhi zesiko, ukusebenzisana nokunye.
tags: bibusiness intelligencegooddataUkuthengisa iWebinarii-saasisoftware njengenkonzo
Uba njani uMphathi weNkqubo yeFowuni
Kutheni uFacebook engayinqumli nje